अर्को व्यक्तिबाट इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्ने तरिका Download
अरू कसैको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष कसरी डाउनलोड गर्ने
करीव एक दशक को लागी, इन्स्टाग्राम सामाजिक नेटवर्क मा एक अंतर खोलिएको छ समकालीन संसार मञ्च मूलतः फोटोग्राफी प्रेमीहरूको लागि सिर्जना गरिएको हो। यद्यपि यो हाल प्राय जसो एक रूपमा प्रयोग गरिएको छ सञ्चारको माध्यम वास्तवमा, भर्खरको ईन्टरफेस अपडेटहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो नेटवर्क अनुभव सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। जहाँसम्म, केहि अवसरहरूमा, जब एक पठाउँदै सीधा सन्देश इन्स्टाग्राम मार्फत प्रयोगकर्ताले यसलाई डाउनलोड गर्न इच्छा गर्न सक्दछ। त्यसकारण, यो कसरी जान्नु आवश्यक छ इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्नुहोस् अर्को व्यक्तिबाट
विगत 10 बर्षदेखि इन्स्टाग्राम सामाजिक आन्दोलनमा अग्रणी रहेको छ। प्रसिद्ध नेटवर्क, यसको सबैभन्दा भर्खरको अद्यावधिकहरूमा, लाई अनुमति दिएको छ को ढुवानी मल्टिमेडिया सन्देशहरू. यस तरिकाले, छविहरू वा भिडियोहरू मार्फत प्रयोगकर्ताहरू बीचको सञ्चार अधिक गतिशील र प्रभावकारी हुनेछ। यी सुविधाहरू भित्र, यो इन्स्टाग्राम कथाहरूमा समानताका साथ सामग्री पठाउन पनि सक्षम हुनेछ। यस्तो तरीकाले पहिले नै एक वा दुई चोटि प्रदर्शन हुनेछ उपलब्ध हुनेछैन लागि प्रयोगकर्ता.
इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष सन्देशहरू एक हुन् उपयोगी उपकरण प्रशंसित प्लेटफर्म सम्बन्धित। उनीहरू मार्फत प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्म सन्देशहरू, छविहरू र भिडियोहरूमा अन्य व्यक्तिहरू पठाउन सक्षम हुनुपर्दछ। यस उपकरणले पारस्परिक सञ्चारको प्रक्रियालाई ठूलो सुविधा पुर्‍याउँछ। यसैले, किलोमिटर टाढा, व्यक्तिहरू सक्षम हुनुपर्दछ तथ्य साझा गर्नुहोस् उनको डायरी बाट अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु संग प्रत्यक्ष।
थप रूपमा, भर्खरका अद्यावधिकहरूले एक पठाउन विकल्प सक्षम गर्दछ निजी इतिहास यो कथा अधिकमा एक वा दुई पटक मात्र हेर्न सकिन्छ, जुन कहिलेकाँही प्रयोगकर्ताले मनपर्दैन। त्यसोभए व्यक्तिले अर्को व्यक्तिबाट सिधै इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्ने तरिका जान्न अनुरोध गर्दछन्। त्यसो गर्न म यस तरीकाले गर्न सक्छु सम्झना राख्नुहोस्, सम्झना वा कुनै अन्य मूल को जानकारी। त्यसकारण अर्को व्यक्तिको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्ने तरीका सिक्ने पूर्ण आवश्यकता भएको छ।
किन कसैको इन्स्टाग्राम डायरेक्ट डाउनलोड गर्ने?
La विचारहरूको विविधता मञ्चको प्रयोगकर्ताहरूको बीचमा बढाइबढाइएको छ, मानवताको विचारहरूको असीम ब्रह्माण्डको विशिष्ट। एक प्रयोगकर्ता र अर्को बीच अनुप्रयोग को उपयोग को कारण धेरै फरक छ। अधिक, कसैको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्नका कारणहरू हुनुपर्दछ। यद्यपि, केहि फेला परेका छन् मुख्य कारणहरू कार्य को प्रदर्शन को लागी।
प्रत्यक्ष सन्देशहरू मार्फत धेरै धेरै साझा हुन्छन् बहुमूल्य जानकारी। एक क्षण एक लामो समय को लागी उनीहरु संग राख्न को लागी पलहरु। तिनीहरू धेरै फरक हुन सक्छन्, जस्तै पहिलो पटक एक बच्चाले "बुबा" भनेको भिडियोको भिडियो। वा पनी, जेठी छोरीको प्रचार भिडियो। हुनसक्छ, तपाईंको साथीसँग पहिलो चुम्बन वा पहिलो नृत्य। माथि उल्लेख गरेझैं ती हुन सक्छन् सामग्रीको अनन्तता र प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि बिभिन्न मानको।
त्यहाँ धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले चाहान्छन् सन्देश राख्नुहोस् पछि पोष्ट गर्नका लागि सिधा। यी, अर्को व्यक्तिबाट सिधै इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्न सहारा लिनुपर्नेछ, सामग्री उनीहरूसँग राख्नका लागि र तिनीहरूलाई पोष्ट गर्न सक्षम हुनुहोस् तपाइँको प्रोफाइल मा। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताले यसको मुख्य कार्यहरू मध्ये एक पूरा गर्नुपर्दछ प्लेटफार्म यो तपाइँको मनपर्ने को सामग्री प्रकाशित गर्न को रूप मा छ।
कुनै पनि इन्स्टाग्राम सन्देश पठाइएको छ सामग्री प्रकार, निर्दोषबाट र सबै दर्शकहरूको लागि उपयुक्त। एक पनि, जो अत्यन्त निजी हो र केवल वयस्कहरूको लागि। त्यसकारण धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको ग्यारेन्टी कायम गर्न छनौट गरेका छन् सामग्री फिल्टरिंग यसको लागि, तिनीहरू अर्को व्यक्तिको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्ने र सुरक्षित राख्ने निर्णय गर्छन्। यस तरिकाले, कुराकानीमा संलग्न सबै मध्ये एक जनाले प्राप्त सन्देश बेवास्ता गर्नु पर्दैन।
यसैले गोपनीयता सम्झौताको ग्यारेन्टी गर्दै कि यो कुराकानीमा सुस्पष्ट हुनुपर्दछ, जहिले पनि प्रस्तुत हुन्छ। यस तरिकाले, को "अस्तित्व" व्यक्तिको गोपनीयता यो सुरक्षित रहन्छ। कसैको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्नका लागि धन्यबाद।
Ver 2019 मा कसरी इन्स्टाग्राममा पैसा कमाउने
अरू कसैको इन्स्टाग्राम डाइरेक्टस कसरी डाउनलोड गर्ने?
अर्को व्यक्तिको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया हो तुलनात्मक रूपमा सरल जे होस्, त्यहाँ डाउनलोड गर्न को लागी सामग्री को प्रकार मा निर्भर धेरै हुन सक्छ। त्यो हो, भण्डारण गर्न प्रक्रिया स्थिर जानकारी यो मोबाइल भन्दा धेरै सरल छ। थप रूपमा, पहिलो अवस्थामा तेस्रो अनुप्रयोगको प्रयोग दोस्रोमा जस्तै आवश्यक पर्दैन।
यदि प्रयोगकर्ताले अर्को व्यक्तिको इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष डाउनलोड गर्न चाहान्छ, र सामग्री तस्वीर हो भने, प्रक्रिया धेरै सरल छ। व्यक्तिले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो सन्देश खोल्नुहोस् हेरौं तुरून्त पछि, प्रयोगकर्ताले मोबाइल उपकरणको पावर बटनमा थिच्नु पर्छ। र भोल्यूम कम गर्न एकैसाथ बटन थिच्नुहोस्। त्यसो भए, यो स्वत: हुन्छ बचत गरिएको छवि पठाइयो।
यो जान्नु आवश्यक छ, कि यस विधि मार्फत Instagram अनुप्रयोगले यसका बारे सन्देश पठाउनेलाई सूचित गर्दछ स्क्रीनशट त्यसो भए अर्को व्यक्तिले थाहा पाउनुपर्दछ कि यो कहिले भयो।
यसको विपरित, प्रक्रिया भिडियोहरू भण्डार गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम डाइरेक्टको माध्यमबाट पठाइएको अलि जटिल छ। यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल स्टोर मार्फत थप अनुप्रयोग प्राप्त गर्नै पर्दछ। अनुप्रयोगको नाम हो AZ स्क्रीन रेकर्डर, र यसको माध्यमबाट प्रयोगकर्तालाई स्क्रीनमा हेरिएका भिडियोहरू रेकर्ड गर्न अनुमति दिइन्छ। यसको प्रयोग गर्नको लागि, व्यक्तिले समीक्षा खोल्न अघि यसलाई मार्क गर्न अनिवार्य छ। यसले स्क्रिन रेकर्डि। सुरु गर्दछ। त्यसोभए तपाईंले सीधा सन्देश खोल्नु पर्छ र यसलाई खेल्न दिनुहोस्। यस तरीकाबाट प्रयोगकर्ताले अर्को व्यक्तिबाट सिधै इन्स्टाग्राम डाउनलोड गर्न प्रबन्ध गरेको छ। हामी तपाईंलाई पनि बताउँछौं तपाइँ कसरी उत्पादनहरू लेबल गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सामाजिक मिडिया योजना को विकास कसरी गर्ने हेर्नुहोस्
एक सामाजिक मिडिया रणनीति कसरी बनाउने सिक्नुहोस्